pk, Author at Swelsone News
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် . ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာလ (၈)ရက်မှ ၊ (၁၅)ရက်အတွင်း . ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန် (၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
သာသနာ့အာဇာနည် နှစ်ပါး မီးသဂြိုလ် ဝမ်နည်းကြေကွဲဖွယ်ရာ ရုပ်သံမြင်ကွင်းများ
မိခင်ကိုလုံးထွေးပြီး မျိုဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ မြွေကြီးကို၊ သတ္တိရှိရှိ တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သား
အထူးသတင်း – မုန်တိုင်းနှစ်လုံးအရှိန်ကြောင့် မိုးနှင့်လေပြင်း သတိပေး
မုန်တိုင်းငယ်မှ အဆင့်တက်ကာ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “ဘာဘ်ဘယ်” အဖြစ်သို့ရောက်ရှိ
November 7, 2019 pk	0 Comments
မုန်တိုင်းငယ်မှ အဆင့်တက်ကာ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “ဘာဘ်ဘယ်-BULBUL” အဖြစ်ရောက်ရှိ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်) (မြန်မာစံတော်ချိန်(၀၆:၀၀) နာရီ အချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ၁။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၆:၀၀)နာရီ
( ၉ ) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ် အစအဆုံး
November 1, 2019 pk	0 Comments
(၁.၁၁.၂၀၁၉) zawgyi (၉)ကြိမ်ထီပေါက်စဉ်(ပေါက်ဂဏန်းအားလုံးအခုpostထဲမှာ editလုပ်တင်ပေးမှာပါ) 🙏သိန်း(15000)ဆု ယ ၈၁၇၄၀၂ 👍သိန်းတစ်သောင်း ဓ ၄၅၅၆၁၄ 👆သိန်းငါးထောင် ဗ ၇၉၁၁၁၈ ဃ ၇၀၁၇၂၆ 👏သိန်း ၂၀၀၀ဆု ကခ ၆၆၁၅၀၇ ထ
(၈)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ထီပေါက်စဉ် အစအဆုံး
October 1, 2019 October 1, 2019 pk	0 Comments
(၈)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ထီပေါက်စဉ် ပေါက်ဂဏန်းအားလုံး အခုpostအောက်မှာ တင်ပေးမှာဖြစ်လို့ like & Share ထားဖို့ မမေ့နဲ့နော် အောင်ပါစေ… သိန်း ၁၅၀၀၀ ဆု😁 ဓ ၃၄၁၆၁၁ သိန်း(10000)ဆု😁 ဎ
(၇)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်း တစ်သောင်းခွဲ ထီပေါက်စဉ်ပေါက်ဂဏန်း အစအဆုံး
September 1, 2019 September 1, 2019 pk	0 Comments
(၇)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် ပေါက်ဂဏန်းအစအဆုံးကို ဒီpostအောက်မှာတင်ပေးမှာပါ Share လေးလုပ်ထားပြီး ရင်ခုန်စွာ ထီတိုက်ကြစို့ သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆု ဆ ၁၉၃၉၉၇ ………………………………………. သိန်းတစ်သောင်းဆု ဏ ၉၂၄၈၄၆ ……………………………………….. သိန်းငါးထောင်ဆု ဆ ၄၀၀၉၈၂ မ
(၇)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် ပေါက်ဂဏန်းအစအဆုံးကို ဒီpostအောက်မှာတင်ပေးမှာပါ Share လေးလုပ်ထားပြီး ရင်ခုန်စွာ ထီတိုက်ကြစို့ 👏👏👏သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆု ဆ ၁၉၃၉၉၇ ………………………………………. 👍👍👍သိန်းတစ်သောင်းဆု ဏ ၉၂၄၈၄၆ ……………………………………….. 👉သိန်းငါးထောင်ဆု ဆ ၄၀၀၉၈၂ မ
သမီး အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ယောက် ကို လူပျို ဟန်ဆောင်ပြီး ကာမလိမ်လည်ယူကာ ကိုယ်ဝန်ရှိမှ ” မွေးလာတဲ့ကလေးက ငါနဲ့ ရတာမဟုတ်ဘူးဘုံဆိုင်ရုပ်ထွက်လာမှာ ” ငါ့မိန်းမက နင့်ထက်သာတယ် နင် က ဖာအဆင့် ‘လို့ပြောလာတဲ့
August 10, 2019 pk	0 Comments
ရွှေပြည်သာမြို့ နယ် အမှတ် ( ၁၁ ) ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအောင်ဝင်း ဆိုသူသည် နယ်ကနေ ရန်ကုန်လာပြီး အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးများအပေါ် ကာမလိမ်လည် ရယူပြီး ယခု လည်းသူ့ သမီးအရွယ် မိန်းကလေးတစ်ယောက် ကို လူပျိုဟန်ဆောင်ပြီး
မီးပွိုင့်မှာ ဆိုင်ကယ်စီးအမျိုးသမီးကို တည့်တည့်ကြီး ဖြတ်နင်းခဲ့တဲ့ ဆယ်ဘီးကား(ရုပ်/သံ)
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပြီးခဲ့တဲ့သြဂုတ်လ (၈)ရက်က ယာဉ်မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ အခင်းဖြစ်ခဲ့ရာနေရာကတော့ Chao Fah East လမ်းမပေါ်၊ Soi Thep Anusorn လမ်း၊ Thepnimit ဘုရားကျောင်းအနီးက မီးပွိုင့်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ အဖြစ်ဆိုးစိတ်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာမရှိပါ” ခရက်ဒစ် – သတင်းထူးသတင်းဦးများ
မုန်တိုင်းကြောင့် မြန်မာပြည် အနှံ့ မိုးရွာမှာဖြစ်ပြီး ရေဘးအထူးသတိပြုရန်လို ဟုဦးထွန်းလွင် ပြောကြား
August 3, 2019 pk	0 Comments
တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရှိ မုန်တိုင်းကြောင့် နိုင်ငံအနှံ့ မိုးကောင်းမည်ဟု ဦးထွန်းလွင်ပြော တောင်တရုတ်ပင်လယ် ရှိ မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင်း မုတ်သုံ လေအားအလွန်ကောင်းနေကာ မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသများအစုတွင် မိုးကောင်းနိုင်ကြောင်း မိုးလေဝသ ပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်က သတိပေးသည်။ တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် ‘ဝီဖာ’ (Wipha)
ဇက်ကြောတက် အုန်းလွဲသူများအတွက် အလွယ်ကူဆုံးဖြေနည်း
ဇက်ကြောတက်တတ်သူတွေအတွက် အထိရောက်ဆုံး ဇက်ကြောဖြေလျှော့နည်း (၅) မျိုး လည်ပင်းရိုးတစ်လျှောက် ညောင်းညာပြီး ဇက်ကြောတက်တာက လူတိုင်းကြုံဖူးတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ မျက်လုံးကို အားစိုက်တာ များသွားတဲ့အခါမျိုး၊ အိပ်ရေးမဝတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ ပိုပြီးတော့ အဖြစ်များပါတယ်။ ဇက်ကြောတတ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် ညအိပ်ခါနီးတိုင်း ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့
Copyright © 2019 Swelsone News. All rights reserved.